1. မုန့်ဖုတ်အတွက်မရှိမဖြစ်ကဘာလဲ လှပသောအရောင်ရှုထောင့်ကိုပေးသည် Plus အားပြီးပြည့်စုံသောအရသာမှချိုထည့်ပါ သကြားဓာတ်မြင့်သည် သင်တို့မူကားထိုသို့ယုံကြဘူး အေးခဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရမ်းလွယ်ကူတယ်လို့ဘယ်သူထင်မလဲ၊ ခင်ဗျားအိမ်မှာ၊ မီးဖိုချောင်မှာရှိသမျှသောကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုလွယ်လွယ်ကူကူကောက်ယူနိုင်သည်။ စားစရာများကိုလှလှပပဖြန်း။ ဂုဏ်ယူအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါဟာတကယ့်အိမ်လုပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ဒါကပျော်ရွှင်မှုစမ်းသပ်မှုလား၊ မုန့်ဖုတ်တာကနေအပို ၀ င်ငွေရှာနေသူ။ ကုန်ကျစရိတ်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်လျှော့ချရန်ပြုလုပ်ကြပါစို့။
2. သကြားဓာတ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း ၄ င်းသည်အမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲသောဖြစ်စဉ်မှတစ်ဆင့်သကြားထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အသွင်အပြင်အဖြူအမှုန့်သည် ပြောင်းဖူးမှုန့် ၃% ခန့်ပါ ၀ င်ပြီးမုန့်ဖုတ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုထိပ်ဆုံးတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲရေစာမှတ်သည်ကောင်းတယ်။ ၎င်းသည်ကိတ်မုန့်ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ကိတ်မုန့်၊ ဒိုးနက်များနှင့်အချိုပွဲများကိုအလှဆင်ရန်အရုပ်များပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကုန်ကြမ်းဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ရှာဖွေရလွယ်ကူပြီးအောက်ပါပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
3. အိမ်တိုင်းတွင်သကြား ၁၅၀ ဂရမ်ရှိသောခဲယဉ်းသောသကြားဓာတ်ကိုပြုလုပ်နိုင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများ (၃) ခုသာရှိသည်။
4. ပြောင်းဖူးဓာတ်နှင့် Blender ၏ 11 ဂရမ်နှုန်း
5. သကြားကနေစတင်။ တစ် ဦး Blender သို့သွန်းလောင်း ပြီးတော့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် spinning စက္ကန့် ၂၀-၃၀ စက္ကန့်ခန့်ကြာမြင့်စွာ spinning အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်
6. •ထို့နောက်ရောစပ်ထားသောသကြားသည်ကောင်းသည်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ တက်ဘလက်တွေရှိနေသေးရင်ထပ်မံလှည့်ပါ။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သည်အထိသေးငယ်သောအမှုန့်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ •သကြားကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောစပ်ပါ။ ထို့နောက်သကြားနှင့်ပြောင်းဖူးမှုန့်များရောနှောပါ။ ပါဝင်မှုနှစ်ခုလုံးကို ၁၀ စက္ကန့်ခန့်အတူတကွရောစပ်ပါ။
7. •ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကောင်းမွန်သောလက်မှုန့်နှင့်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ ပြီးစီးပါပြီ ထိုအခါတံဆိပ်ခတ်ကွန်တိန်နာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့။ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်
8. အိမ်တွင်းအေးခဲမှုမှချိုမြိန်မှုနှင့်နွေးထွေးမှုကိုထည့်ပေါင်းပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစားအစာသည်ကောင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည် ကျနော်တို့ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာလုပ်တဲ့အစားအစာအတွက်သုံးတယ် ထူးခြားတဲ့အရသာရှိခြင်းအပြင် ဇာစ်မြစ်ကိုသိပါ ဒီမုန့်ဖုတ်ပွဲတော်မှာပတ်ပတ်လည်မှာတွေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလျှော့ချပေးတယ်။ icing သကြားလုပ်ကြရအောင် ကိတ်မုန့်များသို့မဟုတ် pastries သူတို့ကိုယ်သူတို့အလှဆင် ငါတို့စားချင်တဲ့သူတွေကိုငါတို့လုပ်ချင်တဲ့ချိုမြိန်မှုကိုသိအောင်လုပ်ပါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်နွေးထွေးမှုတို့ဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသည် သကြားလုံးတိုင်း၏မော်လီကျူးများတွင်လှပစွာအလှဆင်ကြသည် သို့မဟုတ်ကလေးများအားအရုပ်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ကိတ်မုန့်ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်းသည်အမှတ်တရများဖန်တီးပေးသောလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မိသားစုကိုလည်းပြုံးလိုက်တယ် တစ်အရသာချိုထက်ပို